Koonfur Galbeed – Geelle Magazine
Home » Koonfur Galbeed
Koonfur Galbeed / Wararka
Koonfur Galbeed iyo Puntland oo Heshiis wada gaarey.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay ka qeybgalay xaflad soo dhoweyn ah isaga iyo wafdigiisa taas oo loogu sameeyay xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaaladda Baydhabo. Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay xaflada soodhawaynta ayaa sheegay in Puntland iyo Koonfur […]
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo Baydhabo ku geeriyooday
Alle ha u Naxariistee waxaa shalay gelinkii dambe Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ku geeriyooday Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanka geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Yuusuf Cabdinuur, kaasoo la sheegay inuu maalmihii lasoo dhaafay xanuunsanaa. […]
Ciidanka Xoogga dalka oo howlgallo miino baaris ah ka fuliyey Gobolka Shabeelaha Hoose
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgal ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan inta u dhaxeysa Degmada Awdheegle iyo deegaanka KM 50. Ciidamada ayaa waxaa la sheegay in ay howlgalka kusoo saareen kuna qarxiyeen Miinooyin ay […]
Xukuumadda Soomaaliya oo war kasoo saartay diyaaradii ku dhacday Berdaale
Xukuumadda Soomaaliya ayaa war kasoo saartay diyaaradii ku burburtay agagaarka degmada Berdaale ee Gobolka Baay, taas oo ay ku dhinteen 6 Ruux oo isugu jiray Soomaali iyo Ajaanib. Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Federaalka ah […]
Faahfaahinta diyaarad ku burburtay meel u dhow Berdaale
Diyaaradaan oo sida la sheegay ka ambabaxday Magaalada Muqdisho ayaa sii martay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, waxaana ay ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Bardaale. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababaha keenay in ay diyaaradaasi soo […]
Baraawe oo la sheegay in ay ku dhinteen dad badan oo lagu arkay astaamaha Covid 19
Saraakiisha Caafimaadka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa shaaciyey in dad lagu arkay calaamadaha cudurka Coronavirus ay ku jiraan magaalada. Waxay kaloo sheegeen in ay magaalada ku dhinteen dad badan, kuwaasi oo lagu arkay calaamadaha Covid-19, inkastoo sheybaar ahaan […]
Ciidanka Dowladda oo soo bandhigay Nin ay sheegeen inuu Aasayey miino
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo miina baaris ah waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen duleedka deegaanka Janaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxa ay sheegeen in intii ay howlgalka ku jireen ay gacanta ku dhigeen Nin […]
Faah faahin: Qarax ka dhacay Gobolka Shabeelada hoose.
ahmedzaki Posted On April 21, 2020
Faah faahino dheerada ayaa kasoo baxaya Qarax ciidadamo katirsan dowlada somaaliya lagula eegtey gobolka shabeelada hoose gar ahaana Muuri. Qaraxa ayaa ahaa miinada dhulka lagu aaso waxana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa […]
DEG DEG:- Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo muddo kordhin u sameeyey Laftagareen
caliahmed Posted On April 20, 2020
Waxaa maanta Magaalada Baydhabo ee Xarunta kumeelgaar ah ee Maamulka Koonfur Galbeed kulan ku yeeshay Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo ajendahoodu uu ahaa in ay ka doodaan muddo kordhin loo sameynayo Madaxweynaha Maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen). Baarlamaanka cusub […]
Mooshin la horgeeyey Baarlamaanka Koonfur Galbeed
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay ayaa lagu wadaa in Maanta ay kulan ku yeeshaan Xildhibaannada Baarlamaanka Koonfur Galbeed, iyada oo la horgeynayo mooshin muddo kordhin loogu sameynayo Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen). Xildhibaanada ayaa todobaadkii hore […]